Systems - wangyiboxiaozhanme - Wattpad
love System 🐷🐰
148K 27.3K 103
ပန္းနက္သခင္ ရဲ႕ ခ်စ္ျခင္း( Yizhan System )
392 50 6
သိခ်င္ရင္ ဝင္ဖတ္ၾကည့္ 😝😝
Sharktise System🦈🐢(Zw & Un)💜
8.4K 806 26
®®®®®® (Hostဘာလို့ကျမကိုsharktiseလို့နာမည်ပေးတာလဲ) *အော်အဲ့တာလား ဘာလို့လဲဆိုတော့ sharkဆိုတာငမန်းလေ tise ဆိုတာကtortoiseရဲ့အတိုကောက်လေးအဲ့တာကြောင့်မြန်မာလိုဆိုရင်လိပ်ငမန်းပေါ့ဘာလို့အဲ့လိုပေးတာလဲဆိုတော့မင်းပုံကငါးမန်းလေးနဲ့တူပေမဲ့လိပ်မတွေလိုအမြဲတမ်းအရှို့ခံရအောင်လို့ လိပ်ဆိုတာပါထည့်‌ပြီးနာမည်ပေးလိုက်တာ * (........🥲) (ဒီ...
Zawgyi YiZhan System Fic ေလးပါ☺ Unicode YiZhan System Fic လေးပါ☺
System Ku Kue
(Forget Me Not) System
27.9K 4K 36
နတ်ဆိုးဝမ်ရိပေါ်ဆီကထွက်ပြေးနေတဲ့ရှောင်ကျန်နဲ့ ရှောင်ကျန့်အချစ်ကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားနေသောနတ်ဆိုးအရှင်အကြောင်းလေးကို Systemပုံစံလေးကို တွေ့မြင်ရမှာပါ..။ နတ္ဆိုးဝမ္ရိေပၚဆီကထြက္ေျပးေနတဲ့ေ႐ွာင္က်န္နဲ႔ ေ႐ွာင္က်န္႔အခ်စ္ကိုျပန္လည္ရယူဖို႔ႀကိဳးစားေနေသာနတ္ဆိုးအ႐ွင္အေၾကာင္းေလးကို Systemပုံစံေလးကို ေတြ႕ျမင္ရမွာပါ..။
ဘ၀ရဲ့ အနာကျင်ဆုံးအချိန်က အချိန်လွန်ပြီးသိရတဲ့အမှားကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်မရေတာ့တဲ့အခါဘဲ #unicode ဘ၀ရဲ့ အနာက်င္ဆံုးအခ်ိန္က အခ်ိန္လြန္ၿပီးမွ သိရတဲ့အမွားကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ခြင့္မရေတာ့တဲ့အခါဘဲ #Zawgyi
လင် ေပးစားေသာ System (z&u)
3.2K 210 12
yizhan လေးပါနော်💛 အပျော်သဘောနဲ့ရေးထားတာမို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖတ်ပေးကြပါ။
Born Again In System (H I A T U S)
​ရှောင်းကျန့်တစ်​ယောက် မ​တော်တဆ​မှုကြောင့်​သေဆုံးသွားရာက​နေ system spaceက​နေတဆင့် Arcတစ်ခုထဲ​ရောက်သွားခဲ့တယ်။ ဒါ​ပေမဲ့ Arcရဲ့မူလဇာတ်​ကြောင်းက​နေ​သွေဖယ်ပြီး ဇာတ်လမ်းအသစ်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ... ​ေ႐ွာင္းက်န္႔တစ္​ေယာက္ မ​ေတာ္တဆ​မႈေၾကာင့္​ေသဆုံးသြားရာက​ေန system spaceက​ေနတဆင့္ Arcတစ္ခုထဲ​ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ ဒါ​ေပမဲ့ Arcရဲ႕မူလဇာတ္​ေ...
50.7K 7.3K 95
အခုမွ စေရးမဲ့ system fic ေလးပါ အားေပးၾကပါဦး😅😅
"WTF ငါကရေနင်ပြီး ရေနင်ပြီးတော့လေ သေသွားရတာတဲ့လား အားးWTFပဲဟေး"
Scumbag System Xiao Zhan
521 22 2
ငါေတာဒီေခတ္ေရာက္မွေကြးပီေဟ့😥😥 xiao zhan
PSYCHO SYSTEM(Season 1)(ရပ်နား)
ရှောင်ကျန့် - နင်ငါ့ကိုလိမ်တယ် နင်ငါ့ကိုလိမ်တယ် ရိပေါ်-ခွင့်လွတ်ပါရှောင်ကျန့်ငါမင်းကိုလိမ်ဖို့မရီရွယ်ပါဘူး ရှောင်လုံး - နင်ငါ့သခင်ကိုနာကျင်စေတယ်ငါမင်းကိုသတ်မယ်ဝမ်ရိပေါ် ရှောင်ဖန်း - ငါမင်းကိုခွင့်လွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုထပ်ချစ်လာမှာမဟုဘူး လုဟန်ရင်း-ကိုယ် ကိုယ်အမိန့်ကိုမလွန်နိုင်ခဲ့လို့ပါ ဝေ့ဝူရှန်း- မင်ငါ့ကိုနာကျင်စေ...
4.8K 473 7
"ဂါး!!system မင္းလႊတ္ေအာင္ေျပးစမ္း😡" "ရယ္ဒီပါပဲhost😛" #upတာၾကာႏိုင္သည္
Because you are system
34.2K 3.9K 31
အပျင်းထူအဆဲသန် ပန်းချီဆရာလေးရှောင်ကျန့်တစ်ယောက် လူ့ဘဝတွင်သက်တန်းစေ့မနေရသေးပဲ သေဆုံးသွားကာ 1005 system နဲ့ ချိတ်ဆက်မိပြီး ပုံရိပ်ယောင်ကမ္ဘာရဲ့ mission တေကိုထမ်းဆောင်ရပါတော့တယ် ဝမ်ရိပေါ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လိုက် ကောင်လေးကိုချစ်မိသွားမလား အရှင်ဆိုတဲ့နာမ်စားကိုသုံးပြီး အချိုတေမာနစ်မောသွားမှာလား နောက်ဘဝတေမာရော ဘာ mission တေလုပ်ဆောင်...
မ်က္စိလည္၍..System ႏွင့္ခ်စ္ကြၽမ္းဝင္ျခင္း (မျက်စိလည်၍ Systemနှင့်ချစ်ကျွမ်းဝင်​
13.7K 1.2K 8
Systemကို ငါႀကိဳက္တယ္ System ကိုဘဲငါယူမယ္။ Systemကို တိတ္တိတ္ေလး ႀကိဳက္ရင္ေကာ OOC ထိမွာလား... Xiao Zhan × Wang Yibo Systemကို ငါကြိုက်တယ် System ကိုဘဲငါယူမယ်။ Systemကို တိတ်တိတ်လေး ကြိုက်ရင်ကော OOC ထိမှာလား... Xiao Zhan Wang Yibo
5.1K 394 10
ရှောင်ကျန့်တစ်ယောက် သူစီးနေတဲ့ဒန်းပေါ်ကနေ ရုတ်တရက် ထရပ်လိုက်မှုကြောင့် ဒန်းရဲ့တိုင်နဲ့ ခေါင်းနဲ့စောင့်မိပြီး ဂိသွားလေသတည်း။ ဂိသွားပြီး White System နဲ့ချိတ်ဆက်မိသွားသောအခါ system: host ဒီမှာဆိုရင် လိုက်နာရမဲ့ စည်းကမ်းတွေရှိတယ် ရှောင်ကျန့်: ဘာများလဲ system: ကြီးသူကို ရိုသေရမယ် ရှောင်ကျန့်: ဟုတ်တာပေါ့ ဒါဖြစ်သင့်တယ် sys...
Pet System ( Arc - 1, ေ႐ွာင္းက်န္႔)
34.7K 5K 15
I will do missions as your rabbit.
System : Trying to be Seme
System :Host လုပ်ရမှာက Seme ဖြစ်လာဖို့တစ်ခုပဲ။ကျန်တာ ဒီက အချောလေးတာ၀န်ထား≧∇≦≧∇≦ Host: ဒါပေမဲ့ ငါက ရေမရောတဲ့အဖြောင့်စစ်စစ်ကြီးလေ System :ʕ•ε•ʔʕ•ε•ʔ Starting date :2.8.2021 Ending date : System :Host လုပ္ရမွာက Seme ျဖစ္လာဖို႔တစ္ခုပဲ။က်န္တာ ဒီက အေခ်ာေလးတာ၀န္ထား≧∇≦≧∇≦ Host: ဒါေပမဲ့ ငါက ေရမေရာတဲ့အေျဖာင့္စစ္စစ္ႀကီးေလ ...
လူယုတ်မာ SYSTEM (Evil System)👿
18.3K 2.2K 21
System: :hostက ယုတ်မာလိုက်တာ၊ လူယုတ်မာ host ÷_÷ Host : :မင်းတို့ SYSTEM ယုတ်မာလို့ ငါလဲ လိုက်ယုတ်မာ ရတာလေ၊ လူယုတ်မာ SYSTEM :)) - - -This's my first system fic. - - - - So I apologize if something went wrong. 🙏💙 #Viridian Thoon ♡ System: :hostက ယုတ္မာလိုက္တာ၊ လူယုတ္မာ host ÷_÷ Host : :မင္းတို႔ SYSTEM ယုတ္မာလို႔ ငါလဲ...
Chance Given From Heaven
36.8K 6.7K 24
လက်ထဲက ဘေ့စ်ဘောရိုက်တံကိုကျစ်ကျစ်ကိုင်လို့ ပစ်မှတ်ကိုသေချာအာရုံစိုက်တယ်..... ဒီတစ်ခေါက် ဝမ်ရိပေါ်ရဲ့ ပစ်မှတ်က ဘောလုံးမဟုတ်တဲ့ နှလုံးသားတစ်ခုဖြစ်တယ်..... Home Run အထိရိုက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်။ လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် ဝမ်ရိပေါ်က ထိုနှလုံးသားပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးပီး သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအဖြစ် အမွတ္တရ သိမ်းထားချင်မိပါရဲ့... လက္ထဲက ေဘ့စ္...
Find To Remed For The Disease
2.3K 403 13
Main title - Upgrade the backup character to main character system 1st fiction, BJYXツ [ System and owncreation ] Start date-25.8.2021 End date-? If you makeamistake be patient ('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡
Villain ကြီးကသောက်ရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်(Villain ႀကီးေကသာက္ရမ္းေၾကာကၹို႔ေကာင္းတ
99.9K 15K 68
"ငါက systemအစုတ်ပလုတ်ကြောင့်သာမဟုတ်ရင် ဒီလိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့လူအနားမှာဘယ်တော့မှမနေဘူးကွ မင်းတို့ရဲ့villainကြီးကသောက်ရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်" "ငါက systemအစုတၸလုတ္ေၾကာင့္သာမဟုတ္ရင္ ဒီလိုေၾကာကၹို႔ေကာင္းတဲ့လူအနားမြာဘယ္ေတာ့မြေမနဘူးၾက မင္းတို႔ရဲ႕villainႀကီးေကသာက္ရမ္းေၾကာကၹို႔ေကာင္းတယ္" ⚠️not translation⚠️ Yizhan fanfictio...
Refit System (complete )
10.7K 993 14
idol image ကို ထိခိုက်လိုခြင်းမရှိပါ ပထမဆုံးအရေးအသားမို့အမှားပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်ခန့်ပါရှိပါသည်
💚System Coe❤️ (Completed )
116K 16.8K 46
HE ပါ SE ထင္ရင္ လိုက္ရိုက္မာ😘 HE ပါ SE ထင်ရင် လိုက်ရိုက်မာ😘